EP EDITOR, Author at पब्लिक पाेष्ट - Page2of 1465
Author: EP EDITOR
May 4, 2020 May 4, 2020 EP EDITORLeaveaComment on कर्णाली प्रदेशलाई १ हप्ताका लागि पूर्ण सिल गरिने
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषदले १ हप्ताका लागि सम्पूर्ण प्रदेश सिल गर्ने निर्णय गरेको छ । छिमेकी प्रदेशहरु प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितहरु देखिएपछि परिषदले १ हप्ताका लागि सम्पूर्ण प्रदेश नै सिल गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले १ हप्ताका […]
वालिङ। स्याङ्जाको वालिङमा डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन् । पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा आइतबार वालिङ– ८ का ७० वर्षीय एक पुरुषको रगतको परीक्षण गर्दा डेङ्गुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको वालिङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । डेङ्गुका बिरामी फेला परेसँगै वालिङ नगरपालिकाले यो रोग नियन्त्रणका लागि छिट्टै […]
May 4, 2020 May 4, 2020 EP EDITORLeaveaComment on इटालीमा २ महिनापछि लकडाउन खुकुलो
काठमाडाैं । करिव २ महिनापछि इटालीले लकडाउन केही खुकुलो पारेको छ। लकडाउन खुकुलाे भएपछि मानिसहरु विस्तारै घरबाहिर निस्कन सकेका छन्। उनीहरु अब आफन्तहरुको घरमा जान पाउनेछन्। पार्कमा जान सक्नेछन् भने रेष्टुरेन्टमा खाना प्याकिङ लिन जान पाउनेछन्। मानिसहरुले यो पनि आशा गरेका छन् कि उनीहरु अब काममा पनि जान पाउनेछन्। करिव ४० लाख मानिसले काममा जाने […]
May 4, 2020 May 4, 2020 EP EDITORLeaveaComment on लकडाउन पुनः २ हप्ता थप्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनको म्याद फेरि पनि थप्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो पटक वैशाख २५ गतेसम्म बढाइएको लकडाउनको म्याद फेरि पनि करिब २ हप्ताका लागि थप्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले आगामी जेठ १० गतेसम्म लकडाउन बढाउनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । […]
May 4, 2020 May 4, 2020 EP EDITORLeaveaComment on सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालद्वारा उजुरी दर्ता
काठमाण्डौ।सांसदहरु महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले डा. बाबुराम भट्टराईको योजनामा आफू हरुलाई फसाउन खोजिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराउनु भएको छ । राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिँदै उहाँहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईको योजनामा आफू हरुमाथि अपहरणको आरोप लगाउँदै फसाउन खोजिएको बताउनु भएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र […]
नेपालमा पहिलो पटक ७ वर्षको बच्चामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि
May 3, 2020 May 3, 2020 EP EDITORLeaveaComment on नेपालमा पहिलो पटक ७ वर्षको बच्चामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । नेपालमा सात वर्षको बच्चामा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार(आज) सात बर्षीय बच्चामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आज कोरोना पुष्टि भएका नेपालगञ्जका ९ जनामध्ये एक जना सात वर्षको बच्चा पनि रहेको जानकारी दिए । तर संक्रमण देखिएका बालक […]
कोरोना अपडेटः विश्वभर २ लाख ४४ हजारको मृत्यु
May 3, 2020 May 3, 2020 EP EDITORLeaveaComment on कोरोना अपडेटः विश्वभर २ लाख ४४ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर २ लाख ४४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३४ लाख ८१ हजार नाघेको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयानुसार आइतबार मध्याह्नसम्ममा विश्वभर २४ घण्टाको अवधिमा ५ हजार २१५ जनाको ज्यान गएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकामा मात्र १ हजार ६९१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
एक साताअघि डिस्चार्ज गरिएका २ कोरोना संक्रमित फेरि अस्पताल भर्ना
May 3, 2020 May 3, 2020 EP EDITORLeaveaComment on एक साताअघि डिस्चार्ज गरिएका २ कोरोना संक्रमित फेरि अस्पताल भर्ना
वीरगन्ज । कोरोनाको उपचारपछि निको भएको भन्दै नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी घर पठाइएका कोरोनाका संक्रमितमध्ये २ जनालाई फेरि अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिएको छ । नारायणी अस्पतालबाट वैशाख १४ गते डिस्चार्ज गरिएका चारमध्ये २ संक्रमीतलाई हप्ता दिनपछि फेरि नारायणी अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिएको हो । वैशाख १४ गते डिस्चार्ज गरी घर पठाइएका रौतहटको इशानाथ नगरपालिका ८ […]
जंगली च्याउ खाँदा अर्घाखाँचीमा १ को मृत्यु, ३ जना अस्पताल भर्ना
May 3, 2020 May 3, 2020 EP EDITORLeaveaComment on जंगली च्याउ खाँदा अर्घाखाँचीमा १ को मृत्यु, ३ जना अस्पताल भर्ना
अर्घाखाँची । जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नम्बर–६, खिल्जीमा जंगली च्याउ खाँदा आज एक जनाको ज्यान गएको छ । घटनामा तीन जना बिरामी परेका छन् । जंगली च्याउको पहिचान नगरी पकाएर खाएका चारमध्ये ३० वर्षीया रामकला महत्राको उपचारका क्रममा बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मृतककी छोरी सात वर्षीया बिप, सासू ५८ वर्षीया लालसरी […]
नेपालमा एकै दिन कोरोना भाइरसका दश संक्रमित थपिए
May 3, 2020 May 4, 2020 EP EDITORLeaveaComment on नेपालमा एकै दिन कोरोना भाइरसका दश संक्रमित थपिए
काठमाडौं । नेपालमा आज १० जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसंगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले नेपालगञ्जमा ९ तथा पर्साका ३६ वर्षीय पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको बताए । नेपालगञ्जमा ७ देखि ५८ वर्षका ५ […]